आजको राशिफल | News Polar
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ): धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । महिला वर्गबाट सहयोग मिल्नेछ । शिक्षामा सफलता मिल्नेछ, तर शेयर बजारको लगानी गुम्नसक्छ । मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा ): विपरीत वर्ग प्रति आकर्षण बढ्नेछ । सामाजिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । वैदेशिक क्षेत्रको काम अघि बढ्नेछ । …
असार ६ गते आइतबार, कस्तो बित्नेछ तपाईको आजको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ): आज शुभारम्भको चर्चा चल्नेछ । आफन्त र साथीभाइबाट सहयोग तथा हौसला प्राप्त हुनेछ । मेहनतीहरूका लागि दिन फलदायी रहनेछ । मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा ): महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्छ । प्रेमी र प्रेमिकाका बिच खिन्नता बढ्न सक्छ । सौन्दर्यतामा धन खर्च होला । साँझमा पैश…
आज असार ४ गते शुक्रबार, कस्तो रहनेछ तपाईको आजको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ): आज एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । व्यापारमा मनग्ये धनलाभ हुनेछ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । भूमिबाट पनि लाभ रहला । मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा ): उन्नति एवं प्रगतिको वातावरण बन्नेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । वैदेशिक कार्य अघि बढ्नेछ । मेह…
आज असार ३ गते बिहिबार, कस्तो बित्नेछ तपाईको आजको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ): आज छोटो दुरीको लाभदायक यात्रा रहला । एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । नयाँ व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ । मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा ): रमणीय र सुखद् यात्राको योग छ । पार्टी तथा सेमिनारमा सहभागी भइएला । प्रयत्न गरे फाइदा लिन सकिनेछ । शुभकार्यको चर्…
असार २ गते बुधबार, यी राशिहुनेहरुलाई आजको दिन एकदमै ! राम्रो हेर्नुहोस् राशिफल
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ): आज प्रतिष्ठित काम गरेर अवसर हात पार्ने समय छ । चलाखीपूर्ण बोलीले व्यवहारमा फाइदा हुनेछ । सामाजिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा ): बौद्धिक काममा सफलता मिल्नेछ । कला र गलाको प्रभाव बढ्नेछ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । आत्मिक…
आज असार महिनाको पहिलो दिन १ गते मंगलबार, कस्तो बित्नेछ तपाईको आजको दिन ? हेरौं राशिफल
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ): आज विशिष्ट व्यक्तिको साथ पाइनेछ । सामाजिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । जोशजाँगर र हिम्मत बढ्नेछ । दैनिकी कार्य सहज हुँदै जानेछ । मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा ): सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । श्रमको उचित मल्याङ्कन हुनेछ । मनोरञ्जनमा सहभागिता भइएला । पुनर्मिलनक…
आज जेठ महिनाको अन्तिम दिन ३१ गते सोमबार, कस्तो बित्नेछ तपाईको आजको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ): लाभदायक यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । नोकरी गर्नेले मानसम्मान पाउनेछन् । मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा ): बोलिको प्रभावकारिता बढ्नेछ । बन्दव्यापार र पेसाव्यवसायका क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको वातावरण बन्नेछ । शुभका…
आज जेठ ३० गते आइतबार, कस्तो बित्नेछ तपाईको आजको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ): बुद्धिको उपयोग गर्दा जटिल ठानिएको कार्य सम्पादन हुनेछ । धार्मिक, सामाजिक महत्वको क्षेत्रको भ्रमण हुनसक्छ । पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ । मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा ): नयाँ कार्य योजनाबाट लाभ लिन सकिन्छ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठाको लागि सहकार्यको योजना बन्ला । साथीभ…
आज जेठ २८ गते शुक्रबार, कस्तो बित्नेछ तपाईको आजको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ): शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गको कमी हुनेछ । कार्य सम्पादनमा समस्या आउला । महत्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्छ । खानपिनमा पनि विचार गर्नुहोला । मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा ): शुभ कार्यको चर्चा चल्नेछ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्ला । कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ । बन्धु बान्धवबा…
आज जेठ २७ गते बिहिबार, कस्तो बित्नेछ तपाईको आजको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ): आज नयाँ कामको योजना बन्नेछ । काम गर्ने जोश जाँगर र उमङ्ग बढ्नेछ । चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । वैदेशिक कार्य पनि अघि बढ्नेछ । मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा ): शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गको कमी हुनेछ । कार्य सम्पादनमा समस्या आउला । महत्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्नेछ । ख…